Android Studio: Iyo Yepamutemo Android Yakabatanidzwa Ekuvandudza Nharaunda | Kubva kuLinux
Android Studio - Iyo Yepamutemo Android Yakabatanidzwa Ekuvandudza Nharaunda
Si iwe unoda kutanga kugadzira kana kugadzira application ye nharembozha inoshanda sisitimu "Android”Unofanira kuziva izvozvo kune yepamutemo yakasanganiswa yekuvandudza nharaunda yeiyi system.
Android Studio iri yepamutemo IDE (yechidimbu chayo muChirungu, Yakabatanidzwa Yekuvandudza Nzvimbo) yeiyo Android chikuva chakasununguka zvachose kuburikidza neApache License 2.0 uye muchinjika-chikuva (Microsoft Windows, macOS uye GNU / Linux).
1 About Android Studio
2 Maitiro ekuisa Android Studio paLinux?
2.1 Isa Android Studio kubva Flatpak
Android Studio yakavakirwa paJetBrains 'IntelliJ IDEA software uye yakaburitswa seinotsiva Eclipse seyepamutemo IDE ye Android application kuvandudza.
Ichi chishandiso chinopa chishandiso chakazara chekuvandudza uye kugadzirisa zvikumbiro zveGoogle inoshanda sisitimu yemidziyo nhare.
Nayo tinogona kuita kodhi yekugadzirisa, kugadzirisa dambudziko, kushandisa maturusi ekuita, ine inochinja nzira yekubatanidza uye kusika nekukasira uye kutumira, izvo zvinokutendera iwe kuti utarise pakugadzira zvinoshandiswa.
Android Studio inosanganisira mapurojekiti nekodhi matemplate anoita kuti zvive nyore kuwedzera zvakanaka-zvakasimbiswa mapatanisenge padivi rekutenderera kwepaneru uye peji rekutarisa.
Unogona kutanga chirongwa chako nekodhi template kana kudzvanya-kurudyi API mune mupepeti uye sarudza "tsvaga kodhi yekodhi" kutsvaga mienzaniso.
Ukuwo, isu tinokwanisa kuendesa anoshanda anoshanda maficha kubva kuGitHub, zvakananga kubva ku "Gadzira Project" skrini.
ProGuard kusangana uye kunyorera kusaina mabasa.
Dhijitari koni: matipi ekuvandudza, rubatsiro rwekushandura, manhamba ekushandisa.
Gradle-yakavakirwa kuvaka rutsigiro.
Android yakatarwa kugadzirisa uye nekukurumidza kugadzirisa.
Iyo yakapfuma dhizaini dhizaini iyo inobvumira vashandisi kudhonza uye kudonhedza mushandisi interface zvikamu.
Lint maturusi ekuona mashandiro, usability, vhezheni inoenderana, uye zvimwe zvinhu.
Matemplate ekugadzira akajairwa marongero eApple uye zvimwe zvinhu.
Tsigiro yezvirongwa zvekushandisa zveApple Wear.
Yakabatanidzwa rutsigiro rweGoogle Cloud Platform, ichibvumira kusangana neGoogle Cloud Messaging uye App Injini
Chishandiso cheApple chinoshandiswa kumhanya uye kuyedza kunyorera.
Maitiro ekuisa Android Studio paLinux?
Kuti uise iyi IDE kugadzira Android zvishandiso, Tinogona kuteedzera rairo dzatinogovana pazasi.
Para avo vari Arch Linux vashandisi, Manjaro, Antergos kana chero kugoverwa kwakatorwa kubva kuArch, tinogona kuisa iyi IDE kubva kuAUR repositories. Saka tinofanira kuva nemubatsiri.
Unogona kushandisa iyo yandinokurudzira mune ino chinyorwa.
Ingo nyora unotevera kuraira kuti uise:
Izvo zvakakosha kuti uve neJava yakaiswa pane system, kuti tikwanise kuiisa ne:
Zvino nezvenyaya ye Debian, Ubuntu, Linux Mint uye chero chinobva pane izvi, tinogona kuchiisa nenzira inotevera.
Kutanga isu tinofanirwa kuisa kumwe kutsamira muhurongwa, tinoita izvi nekutaipa mune inouraya:
Mushure meizvi isu tinofanirwa kuenderera kurodha pasi Android Studio kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti yeprojekiti, unogona kuzviita kubva chinotevera chinongedzo.
Waita kurodha pasi isu tinofanirwa kusunungura iyo faira ne:
Pashure pei isu tinoshandura kune inotevera folda:
Waita izvi isu tinoenderera mberi nekumhanyisa iyo inosimudza ne:
Uye voila, neizvozvo isu tatova neIDE yakaiswa. Unogona kumhanya neizvi:
Isa Android Studio kubva Flatpak
Tinogona kuisa iyi IDE nerubatsiro rweFlatpakIsu tinongofanirwa kuve nerutsigiro kuti tikwanise kuisa zvinoshandiswa neiyi tekinoroji.
Tatova nechokwadi chekuti tinogona kuisa kunyorera kwerudzi urwu, Isu tinongofanirwa kuvhura terminal uye kuitisa mairi:
Uye takagadzirira nayo tinogona kutanga kushandisa iyo IDE, ingo nyora zvinotevera kumhanya Android Studio muhurongwa:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Android Studio - Iyo Yepamutemo Android Yakabatanidzwa Ekuvandudza Nharaunda
Mupiro wakanaka! Ndatenda!
Wayland 1.16 yakaburitswa nezvimwe zvidzoreso